Christmas Assistance Program-Older Versi | Giftsofhope
Barnaamijka Caawinta Kirismaska ee 2020
Qofna ma soo marin dhulkan isagoon caawimaad uga baahnayn kuwa kale. Dhamaanteen waxaan ku dhibtoonay waqti nolosheena ah - maskax ahaan, jir ahaan, dhaqaale ahaan ama ruux ahaanba. Kirismaska ​​badanaa waa waqti adag. Haddii aad isku aragto inaad la dhibtooneyso nolol maalmeedkaaga oo aad u baahan tahay caawimaad Fasaxa Kirismaska, waxaan halkaan u joognaa inaan ku caawinno! Waxaan taageero siineynaa qoysaska Gobolka Washington ee leh carruur 0-18 sano jir ah iyo Dad Waayeel ah annaga oo helna kafaala qaadayaal toos ah oo ugu deeqa hadiyadaha Kirismaska.
** Nidaamka Codsiga wuxuu furmi doonaa Oktoobar 31st, 2020 (saqda dhexe) wuxuuna xirmi doonaa (saqda dhexe) Nofeembar 7th, 2020 **
Baaxadda codsiyada gargaarka awgeed, waxaan xaddidi doonnaa tirada carruurta aan ku aqbali karno Barnaamijka Kaalmada Kirismaska ​​ee GOH.
Dhammaan Codsadeyaashu waxay heli doonaan farriin bilow ah: xaaladda codsigooda ugu dambayn Nofeembar 16th, 2020.
THE 2021 APPLICATION PROCESS IS CLOSED
Wellspring Family Store
Ayaa Codsan Kara?
Barnaamijka Caawinta Kirismaska ​​ee 'GOH' wuxuu aqbali doonaa dadka waayeelka ah ee waayeelka ah iyo qoysaska Gobolka Washington iyo sidoo kale qoysaska ay soo gudbiso hay'adda bulshada. Dadka qaata SNAP iyo TANF waxay u baahan doonaan inay siiyaan macmiilkooda ID #, kaas oo aan ka hubino faahfaahinta xubnaha qoyska.
Marka la ansixiyo, waxaad heli doontaa macluumaad faahfaahsan oo laxiriira Hadiyadaha Kirismaska ​​iyo Boorsada Ciida Fasaxa Ciida iyo goobta.
Markaad timaaddo, waxaa lagaa doonayaa inaad keento waxyaabaha soo socda:
Waa maxay dukumiintiyada loo baahan yahay?
Aqoonsiga Sawirka Dowlada ee Waalidka / Mas'uulka
Shahaadooyinka Dhalashada ee dhammaan carruurta
Dhammaanteen waxaan halkan u joognaa sabab. Noqo isha jacaylka, oo daawada iyada oo abuureysa saameyn ciriiri ah oo hareerahaaga ah. ”
- Michelle Maros